सउलकै सबैभन्दा ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोरले खुलेको २ हप्तामै गर्यो रेकर्ड ब्रेकि’ङ ब्यापार – Eps Sathi
March 11, 2021 1584
दक्षिण कोरियाको राजधानी सउलकै सबैभन्दा ठूलो डिपार्टमेन्ट स्टोर, ‘हुण्डाइ सउल डिपार्टमेन्ट स्टोर’ अहिले कोरियामै तहल्का मच्चाइरहेको छ। यसको लोकप्रियता कोरियामा अहिले ह्वात्तै बढेको छ। लोकप्रियताका कारण खुलेको केहि दिनमै यसको ब्यापारले रेकर्ड राख्न सफल भएको छ।
डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुको विश्लेषण गर्ने संस्थाको रि’पोर्टअनुसार सेन्ट्रल सउलको येविदोमा रहेको यो स्टोरले ब्यापारमा रेकर्ड ब्रे’क गरेको छ। औपचारीक रुपमा सुरु भएको १ हप्ताकै छोटो अवधिमा यस स्टोरले ३७ अर्ब २ करोड वनको ब्यापार गरेको छ। यस स्टोरको प्रि ओपनिङ गत फेब्रुअरी २४ मा भएको थियो।
पहिलो हप्ताको अवधिमा करिब १५ लाख ग्राहकले यो स्टोर भिजिट गरेका थिए। डिपार्टमेन्ट स्टोर खुलेपछिको पहिलो सार्बजनिक बिदा अर्थात फेब्रुअरी २८ तारिक आइतबारमात्रै करिब १० अर्ब कोरियन वन ब्यापार भएको बताइएको छ। यो ब्यापार रिटेल ब्यापारमा कोरियाकै सबैभन्दा धेरै हो।
को’रोना भाइ’रसले रिटेल बिजनेशलाई तह’स न’हस पारिरहेकै समयमा यो हुण्डाइ सउल डिपार्टमेन्ट स्टोर खुलेको थियो। भाइरसको महा’मारीले मानिसहरु प्रत्यक्ष स्टोरमा गइ सामान किन्नुको सट्टा अनलाईनबाट किन्ने ट्रेन्ड बढिरहेको बेला यो स्टोरको ब्यापारले केहि आशा देखाएको छ। एक दशकपछि सउलमा खुलेको यो नै पहिलो डिपार्टमेन्ट स्टोर हो। यसअघि सन २०११ मा लोट्टेले किम्फो एअरपोर्टमा आफ्नो शाखा खोलेको थियो।
यो स्टोर सउलकै सबैभन्दा ठूलो स्टोर हो जुन ८९ हजार १ सय बर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसको आधाभन्दा बढि क्षेत्रफल रेस्ट गर्न तथा बस्नका लागि खुल्ला छाडिएको छ। यो कुराले धेरै ग्राहकहरुलाई आकर्षित गरेको छ। हुण्डाइ डिपार्टमेण्ट स्टोरका अनुसार यसको कुल बिक्री मार्च ५ देखि ७ को विचमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा करिब ११० प्रतिशतले बढेको छ। यो बृध्दि कोरो’ना महा’मारी भन्दा अघि २६.५ प्रतिशत मात्र थियो। यति ठूलो बिक्री बढ्नुमा भरखरै खुलेको हुण्डाइ सउल डिपार्टमेन्ट स्टोरको योगदान उल्लेख्य रहेको छ। यो स्टोरबाहेक कोरियामा हुण्डाइका अरु स्टोरको कुल बिक्री ७२.५ प्रतिशतको बृध्दि रहेको देखिन्छ। photo credit: Koreatimes.
Prevकोरियामै अ’स्ताए अर्का एक नेपाली
Nextअहिलेसम्म कोरियामा कतिले लगाए भ्याक्सिन? जानौं
कोरियामा कुकुर कुट्नेलाई १ करोड २० लाख जरिवाना
कोरियामा चामल खपत घट्दो।
बाहिरी विश्वका बारेमा चासो राख्न थालेपछि किम जोङले थ’र्काए आफ्नो देशका युवाहरुलाई
खुल्यो आजबाट साहस उर्जाको आइपिओ, कस्तो छ कम्पनी? कति कित्ता भर्दा ठिक?